Hlola i-Agra, India - World Tourism Portal
Hlola i-Agra, India
Ongakubona e-Agra, eNdiya. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Agra, India.
Ongakwenza e-Agra, India
Uhambo losuku kusuka e-Agra
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Agra, India
Bukela ividiyo nge-Agra, India
Hlola i-Agra idolobha lase Taj Mahal, esifundeni esenyakatho neNdiya sase-Uttar Pradesh, amanye ama-200 km ukusuka Delhi.
Lapho uzama ukuhlola i-Agra enezinto ezintathu ze-UNESCO Wizingosi zama-Orld Heritage, iTaj Mahal ne-Agra Fort edolobheni neFatehpur Sikri eduzane uzothola ukuthi Kukhona nezinye izakhiwo eziningi namathuna kusuka ezinsukwini zika-Agra zodumo njengenhloko-dolobha yoMbuso WaseMughal.
Iziza ngezinye zezimangaliso zomhlaba futhi akukho luhambo oluya eNdiya luphelele ngaphandle kokuhambela okungenani kweTaj.
Izimoto azivunyelwe eduze kweTaj Mahal tata, kepha okusele kwe-Agra kudlula kalula ngemoto. Ukuqashwa kuyatholakala kusuka kuma-ejensi ahlukahlukene wokuqasha
Kungenzeka ukuqasha imoto nomshayeli.
Izimpawu ezimbili eziphambili zika-Agra yilezi ezingenakuqhathaniswa iTaj Mahal ne-Agra Fort.
Le nqaba ifana nokuhlelwa kweRed Fort kuyo Delhi, kepha kulondolozwe kangcono, njengoba iningi leDelhi Fort labhujiswa yiBritish ngemuva kweMutiny. Kanye nesigodlo njengesakhiwo esizivikelayo, kwakhiwa futhi ikakhulukazi ngetshe lesilika elibomvu.
UMbusi u-Akbar, oyinkosi e-14, waqala ukuhlanganisa umbuso wakhe futhi, njengokuqina kwamandla akhe wakha i-fort e-Agra phakathi kwe-1565 ne-1571, ngasikhathi sinye neHumayun's Tomb eDelhi. UMbusi u-Shah Jahan unezele kule nqaba futhi waqeda isiboshwa kuyo. Inqaba inombono omuhle wobungcweti bayo, iTaj Mahal, ngosuku olucacile.
Ungangena kule nqaba nguRickshaw waseTaj Mahal.
Kukhona nemihlahlandlela yokulalelwayo etholakala e-Agra Fort ongayiqasha ngezindleko ngesiNgisi nezinye izilimi zakwamanye amazwe (isiJalimane, isiFulentshi, iSpanish, njll) ngezilimi zaseNdiya ezinjengesiHindi noma isiBangali.
Izingadi - amathempeli e-Agra
Ama-Adlabs amaningi. I-Interactive Theatre, okuwumdlalo wokuqala weshashalazi we-cinema osebenzelana kakhulu emhlabeni, isibukeli ngasinye siphethe iyunithi elikude elingenazintambo ngezinkinobho zokucindezela nesikrini esincane se-LCD, sibavumela ukuba babambe iqhaza kumdlalo we-trivia mayelana nengqikithi yefilimu. Lo mbukiso ubizwa ngokuthi yiNdiya eMotion, okuwumzuzu we-25 lapho ababukeli bezodlula khona eNdiya yanamuhla, noma, ezinqoleni eziningi ezejwayelekile futhi babone imicimbi yezomlando kumasayithi anjengeMohenjo Daro, Indraprastha neTaj Mahal, behlangabezana nokuxinana. izindlovu zigibela nomoya ovunguza ezinweleni zabo, noma isikebhe esinyakazayo esinokufafaza okunosawoti ebusweni babo. Ngaphambi kombukiso wangempela kuba nemibuzo esebenzisana ngezihloko ezahlukahlukene ezihlobene India.
I-Agra Food Tour. Hlola ukubona nokudla kwe-Agra ngezindawo zokudla nokuvakasha kwezithombe. Lezi zindawo zokudla ziyindlela enhle kakhulu yokuba izivakashi ukunambitha ukudla okuthile kwasendaweni ngendlela ephephile. Ukuvakasha kwesithombe kungenziwa ngokwezifiso ukusiza izivakashi ukuba zenze iningi lohambo lwazo lwe-Agra futhi zithathe izithombe ezinhle.
Taj Mahotsav. Umkhosi wosuku we-10 oqhutshwa ngoFebhuwari / Mashi minyaka yonke eShilpgram, eduze kweTaj Mahal. Kungumkhosi wobuciko, ubuciko, isiko, njll.
Thola i-Agra ku-Battery Powered Rickshaws. Ungazitholi nje izikhumbuzo zamagugu kuphela kodwa futhi namasiko wedolobha, izinto zokudlela, ubuciko kanye nokuphila kwabantu bendawo.
Taj Mahal Photo Bhalobhasha. Lezi zihlumela zezithombe ziyisinqumo esihle kakhulu uma ufuna ukuthola umthwebuli wezithombe ozothatha izithombe zakho phambi kweTaj Mahal nezinye isikhumbuzo edolobheni. Abaqondisi / bezithombe bendawo bakuyisa kwezinye izindawo ezinhle futhi uthathe izithombe lapho. Uhambo lungenziwa ngokwezifiso ngezinga elithile.
I-Agra inezitolo eziningi ezidayisa imikhiqizo ehlukahlukene yamatshe, kusukela ubucwebe kuya emabhokisini amancane nasezigxotsheni ezinomsebenzi ofana nalawo weTaj. Okuhle kwalokhu kuyamangalisa, futhi ngisho nakulabo abagijimayo kukhona okuhle kakhulu. I-Agra idume nangezimpahla zayo zesikhumba. Cabanga ukuchitha isikhathi eSadar Bazaar ukuthenga okuthile nokujabulela ukudla okushibhile.
Qaphela ukuthi usindwa kakhulu. Ungavumeli noma ngubani ukuholele esitolo, ngoba intengo iyenyuka ukumboza ikhomishini yabo, imvamisa i-50%. Xwayisisa kakhulu izethembiso ezenziwa yilaba bantu. Zuza kanzima. Zilungiselele ukuhamba, ungahlala njalo uthole izinto ezifanayo kwesinye isitolo. Futhi khumbula ukuthi kulezi zikhathi zomhlaba, ungahlala u-oda izinto ozithandayo ekuhambeleni kwakho nge-inthanethi ngemuva kokubuya kwakho. Lindela ukuhlangana nabanikazi bezitolo abancane nabanobugovu abazophenya wonke amanga encwadini ukuze bathengise (ngamarkups okuqala we-1000-10000%).
Iya kumakethe yesango le-taj mahal empumalanga ngoba lapho uzothola khona izitolo zezitolo ezingaphezu kwe50, uzothola imikhiqizo emihle ngamanani afanele ngoba imakethe yokuncintisana. Sicela uvakashele futhi ugcine imali yakho. Futhi ungalaleli umhlahlandlela wakho wokuvakasha, bazama ukukuhola ngokungafanele ngenxa yekhomishini yabo.
Izimakethe eziningi zakule ndawo zikhona: ISADAR BAZAR..imakethe eyinkimbinkimbi, imakethe yaseRaja ki Mandi, iSanjay Indawo yawo wonke amahhovisi, iMakethe ye-Shah yemishini kagesi. Zonke lezi zimakethe zitholakala ku-MG Road. I-Hospital Road Market kanye ne-Subhash Bazar yezingubo eziseduzane nesiteshi sesitimela i-Agra Fort. Imakethe yaseRawatpara yenzelwe izinongo zayo yonke imvelaphi. Ngaphandle kwalokhu kunemibukiso eminingi ebekiwe enomgwaqo uMG ..
Imikhiqizo eminingi yemabula iyatholakala eGokul Pura (eMakethe) eduzane naseRaja Mandi (le ndawo iseduze kweM. G Road) engafinyeleleka kalula nge-auto rickshaw, intengo yanoma yimuphi umkhiqizo icishe ibe yi-25% yalokho emakethe yezitolo .
Qaphela amatsheyori: Amatshe amaningi amkhovu futhi intengo iphezulu kakhulu!
Okukhethekile kwe-Agra yi-petha, uhlobo lwamaswidi amnandi kakhulu, kanye ne-Dal Moth, inhlanganisela ye-lentil enephunga. Zombili futhi izikhumbuzo ezidumile.
Isihlalo. I-Agra yizulu nganoma yisiphi isithandwa se-Chaat. I-Chaat ingaba ngezinhlobo ezahlukahlukene kepha kunento eyodwa evamile phakathi kwabo bonke ukuthi iyinaphunga futhi uzothola isixuku ngaphandle kwawo wonke amabala ezitolo. ISamosa neKachori zitholakala kuzo zonke izitolo ezimnandi ezigcwala edolobheni. Ezinye izinto ezijwayelekile zokungahambi kahle yi-Aloo Tikki (amaqebelengwane enziwe ngamazambane), i-paner tikka (amashekeli we-cottage shizi abhakwe ku-tandoor enezinongo), i-pani puri noma i-golguppa (amagobolondo amancane ayindilinga agcwele ukugcwaliswa okusekwe amazambane nesipayisi- inhlanganisela emnandi yamasosi), ama-mangores, ama-Samosaes, amaChachori, njll. Uma ufuna ukujabulela i-Agra Breakfast ejwayelekile khumbula ukukhipha enye yalezo zinongo ezibabazekayo zeBerahi bese uyizungeza no-Jalebies omnandi.
Amaswidi. Kukhona izitolo ezimbalwa ezinhle zamaswidi nxazonke zedolobha. Kunezinhlobo eziningi ze-petha ezitholakalayo kepha, ngomuzwa oyiqiniso, zama noma okucacile (amhlophe endlovu) noma i-Angoori Flavored (izingcezu ezingunxande nezphuzi ezimbozwe isiraphu kashukela). Khumbula ukukhipha isidlo sakho ngeJoda (Pair) yePan ehlukile edolobheni.
Kukhona nenala yokudla kwaseKorea ezindaweni zokudlela eziningi.
Kukhona indawo yokudlela eminingana endaweni yeTaj Ganj, enakekela izivakashi eziningi ezihlala ezungeze iTaj Mahal.
Iningi labasebenzi bamahhotela liyojabulela ukukutholela ibhodlela elibandayo likabhiya waseNdiya, kodwa cishe akukho busuku bokudla e-Agra ngaphandle kwemibukiso yamasiko kwamanye amahhotela nezindawo zokudlela ezinkulu.
Kunamakhofi amaningi we-inthanethi / amaCyber ​​Cafes ukusuka lapho ungangena khona i-inthanethi ngokuthumela i-imeyili noma ukulayisha izithombe zakho zedijithali.
UFatehpur Sikri isiza samagugu emhlabeni se-UNESCO. Wakhiwa ngekhulu le-16th yi-Emperor Akbar, uFatehpur Sikri (Idolobha Lokunqoba) wayeyinhloko-dolobha yoMbuso WaseMughal cishe iminyaka eyi-10. Ngemuva kwalokho yashiywa ngenxa yezizathu eziseyimfihlo. Kubandakanya elinye lamaSulumane amakhulu eNdiya, iJama Masjid. Igcwele izigodlo namagceke alondolozwe kahle, futhi kufanele kubonwe kunoma ngubani ovakashela i-Agra. Ukuze uthole umbono ophelele wale sayithi kungcono ukuthatha umhlahlandlela noma ube nomhlahlandlela omuhle ophrintiwe. Ukungena kwesiza (ngisho nasegcekeni) kuphela ngaphandle kwezicathu.
UMathura yindawo yokuzalwa kweNkosi Krishna. Kunamathempeli amaningi amahle eMathura, kubandakanya naleyo eyakhiwa endaweni yokuzalwa kukaShri Krishna.
IVrindavan iyindawo yenkolo ezungeze i-50 km ukusuka e-Agra, futhi eduze impela neMathura. Kunamathempeli amaningi lapha anikezelwe ku-Lord Krishna, ambalwa awo adumile kakhulu yiBanke Bihari ne-Iskcon Temple.
INandgaon kwakuyikhaya lika-Shri Krishna`'s foster father, Nand. Esiqongweni segquma kunethempeli elibanzi leNand Rai, elakhiwe ngumbusi weHat Roop Singh. Amanye amathempeli lapha anikezelwe eNarsingha, Gopinath, Nritya Gopal, Girdhari, Nand Nandan, nase Yasodha Nandan, okuphakathi nesiqongo sentaba. INandgaon iqala ukusebenza minyaka yonke ngoMashi ngomkhosi weHoli, lapho izivakashi eziningi zithuthelwa idolobha nge-lath mar holi edumile.
I-Bharatpur icishe ibe yi-56 km ukusuka e-Agra futhi ifaka indawo engcwele yezinyoni lapho ungabona khona izinkulungwane zezinyoni ezingavamile kufaka ne-Siberiaan Crane. Kukhona iLohagarh Fort, eyaqhubeka ingenakunqotshwa naphezu kokuhlaselwa kaningana kwabaseBrithani. I-32 km nje ukusuka e-Bharatpur yiDeeg Palace. Le nqaba eqinile futhi enkulu kwakuyindawo yokuphumula yasehlobo yababusi be-Bharatpur futhi in izigodlo eziningi nezingadi.
INational Chambal Sangment, (i-70 km away) iyindawo yemvelo eyikhaya lezindlu ezisengozini yokuphela kwe-Indian gharial (isihlobo sengwenya) kanye neGanges River Dolphin (nayo esengozini).
Zizwe ukhululekile ukuhlola i-Agra.